Daawo Sawirro: Baarlamaanka Kenya oo gacmaha iskula tagay iyo Xildhibaanada Mucaaradka oo Dacwo u aaday!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Daawo Sawirro: Baarlamaanka Kenya oo gacmaha iskula tagay iyo Xildhibaanada Mucaaradka oo Dacwo u aaday!!
Daawo Sawirro: Baarlamaanka Kenya oo gacmaha iskula tagay iyo Xildhibaanada Mucaaradka oo Dacwo u aaday!!
Baarlamaanka dalka Kenya oo kulan isugu yimid Xarunta Baarlamaanka ee magaalada Nariobi ayaa gacmaha iskula tagay xili ay u fadhiyeen ka doodista isbaddelo lagu sameenayo sharciga doorashada dalkaasi.
Kulanka Baarlamaanka ayaa ahaa mid looga doodayay isbadalo la doonayo in lagu soo kordhiyo sharciga doorashada dalkaasi, waxa ayna Baarlamaanka ka doodayeen sharci ogolaanaya in codadka doorashada gacan loo adeegsado haddii tiknoolajiyadda lagu tirinayo codadka cilad ku timaado.
Sharci Baarlamaanka horey u ansixiyeen ayaa u ogolaanayay in tirinta codadka doorashada ay noqoto kaliya mid loo adeegsado qalabka Tiknoolajiyada, hasa ahaatee qodobkaasi ayaa Baarlamanaka doonayana in wax ka badal lagu sameeyo si gacanta loo adeegsado hadii Tiknoolajiyada shaqeyn weyso.
Intii ay socotay ka doodista sharcigan Baarlamaankana uusan go’ana ka gaarin ayaa waxaa ka dhacay Kulanka Baarlamaanka gacan ka hadal, waxa ayna Sheegeen Xildhibanaada mucaaradka in gacanta loola tagay si sharciga xoog loogu meel mariyo.
Xildhibaanada Mucaaradka aya isaga baxay fadhiga Baarlamanaka waxa ayna u dareersadeen Maxkamad sare ee dalkaasi si ay dacwad ugu gudbiyaan loogana hor istaago in la meel mariyo sharcigan cusub.
Xildhibaanada Mucaaradka ah ayaa kasoo horjeeda in tirinta gacan loo adeegsado, waxa ayna sheegeen hadii ay taasi dhacdo in ay horseedeyso in Xisbiga talada haya ay ku shubtaan codadka doorashada.
Ciidamo hubeesan oo katirsan booliiska Kenya ayaa la geeyay xarunta Baarlamaanka ay ka dhacday qalalaasaha, waa ayna Ciidamada adkeeyeen amaanka xaruntaasi si aysan mar kale uga dhicin qalalaaso .
Previous Post"Sawirro" Qoys Dagan Magaalada Burco oo gurigoodi lagu sixray iyo Culumo Quraan ku soosaartay Sixirkii loo aasay!! Next PostXuseen Carab Ciise oo dib loogu doortay Kursiga Xildhibaanimo ee beeshiisa "Sawirro"!!